रातो दाखमद्यको साथ पिंटो सिमी - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
रातो रक्सीको साथ पिन्टो सिमिहरू
सुरूवात18 मिनेट2 व्यक्ति
आजको विधि सरल र सरल छ, को उत्सवको अनुसार Lent र ईस्टर। यद्यपि, स्पष्ट रूपमा, यो कुनै पनि अन्य समयमा पनि तयार गर्न सकिन्छ।
हामीले गर्नुपर्ने भनेकोaहो मखमली जसमा ब्रोथ वा स्टकको सट्टा, रातो दाखमद्य प्रयोग गरिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि यस चटनीको विशेष नाम छ तर मलाई थाहा छैन। मलाई के थाहा छ त्यो परिणाम स्वादिष्ट हुन्छ।
यो तयारीलाई अझ सजिलो बनाउनको लागि, मैले पहिले नै पकाएको कालो सिमीहरू प्रयोग गरिसकेको छु, जुन प्रकारको सिसाको भाँडामा आउँछ। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईसँग सँधै एकमा नै छ पेन्ट्री किनकी ती हामीलाई एक भन्दा बढि हतारमा बाहिर निकाल्न सक्छन् ... वा के तपाईंले कहिल्यै फलफूल भिजाउन बिर्सनुभयो?
यी प्रकारका सामग्रीहरू पहिल्यै पकाइएकाले, तयारी समयहरू ध्यानपूर्वक कम गरिन्छ। त्यसैले हामी संग व्यंजनहरु हुनेछ फलफूलहरू minutes० मिनेट भन्दा कममा तयार।
1 रातो रक्सीको साथ पिन्टो सिमिहरू
एक स्वस्थ र स्वस्थ आहार को लागी फलहरु मा आधारित एक नुस्खा।
कुल समय: 18M
G 35 ग्राम जैतुनको तेल
पिन्टो बीन्सको १ भाँडा (ड्रेन गरिएको तौल g०० g)
Red० g रेड वाइन
प्याज र लसुन पिल र काट्नुहोस्। तेल संग काँच मा जोड्नुहोस्। समयमा काट्नुहोस् Seconds सेकेन्ड गतिमा। समयमा पोच Minutes मिनेट, १००º, गति १।
समय पछि, पीठोको ठूलो चमचा थप्नुहोस् र लागि मिक्स गर्नुहोस् Minutes मिनेट, १००º गति २।
वाइन र कार्यक्रम थप्नुहोस् Minutes मिनेट, Varoma तापमान, गति २, बेकर बिना नै कि रक्सी राम्रोसँग बाफ हुन्छ।
त्यसपछि ब्लेड मा पुतली राख्नुहोस्। धोइएका र कोरिएको काली गेडाहरू, पानी र लौंगहरूमा हाल्नुहोस्। कार्यक्रम Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
प्रक्रिया समाप्त भएपछि लौंगहरू निकाल्नुहोस्, मौसम र सॉस गाढा हुनु भन्दा पहिले सर्व्ह गर्नुहोस्।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, इस्टर रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » रातो रक्सीको साथ पिन्टो सिमिहरू
कृपया people व्यक्तिको रकम प्रविष्ट गर्नुहोस्
नमस्ते मोनिका र लौरा:
मूल नुस्खा recipe व्यक्तिको लागि हो र मात्राहरू हुन्:
सुका गेडाहरू को 500 ग्राम (जसको तपाईं भिजाउनु पर्छ)
Table चम्चा तेल
१ ठूलो प्याज
१ गिलास रेड वाइन (पानीको)
१ राम्रो आधा चम्चा पीठो
नुस्खाले पानीको मात्रा तोक्दैन, त्यसैले सबैले प्रयोग गर्नु पर्छ। मैले २ व्यक्तिको लागि g०० ग्राम राखें र सास न त धेरै मोटा थियो न त धेरै नै।
तपाईंले यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ कि प्याज, अधिक मानिसहरू त्यहाँ छन्, त्यहाँ राख्नुपर्नेछ। यो पच गर्नका लागि अधिक तेल।
फलफूलका लागि तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि ती करीव १०० ग्राम कच्चा छन्। भिगोने र पकाएपछि उनीहरूले वजन बढाउँछन्।
म आशा गर्दछु कि यी नोटहरूले तपाईको सेवा गर्दछ
भोली म तिनीहरूलाई खान दिदैछु, मैले सबै कुराको दुई गुणा लिने सोचेको छु र म देख्नेछु
कस्तो राम्रो लौरा! ठिक छ, तपाइँ हामीलाई भन्नुहुनेछ, पक्कै पनि तपाइँ १० बाट बाहिर आउनुहुनेछ हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
एडुआर्डो लोपेज मारसिकल भन्यो
र चामलको साथ पिन्टो गेडाहरू, कसरी तिनीहरू बनाइन्छन्
एडुआर्डो लोपेज मार्शिकलाई जवाफ दिनुहोस्
ए एडुआर्डो ... तपाईं कसरी यो ताप संग चामलको बीन्सको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ ??
विधि सरल छ, तपाईंले भर्खरको सिमीहरू पकाउने बेलामा तपाईंले एक मुठ्ठी चामल राख्नुपर्दछ तर सम्पूर्ण नुस्खा हेर्न तपाईंले चिसो आउन पर्खनु पर्नेछ।
नमस्कार मैले भर्खरै रेसिपी बनाएको छु र तिनीहरू मद्दतकोलाग्दो र दुर्गन्धित छन्। मैले दुई व्यक्तिको लागि दुई पटक तपाईंको नुस्खा पकाउन चार व्यक्तिको गणना गरें र यो बाहिर आउँदैन। त्यसो भए मँ हेर्न थाल्छु, र तपाईं भन्नुहुन्छ कि छ व्यक्तिको लागि यो एक गिलास वाइन हो !!!! जुनसँग दुई व्यक्तिको लागि, यो २०० ग्राम हुन सक्दैन! मैले यो यो गरे जस्तै भयो, किनकि यसले डबल सबै थप्दै डबल खानी थियो, अर्थात् 200०० ग्राम वाइन, र यो सबै थोक फ्याँक्नु हो। मलाई लाग्छ तपाईंसँग गलत मात्रा छ।
व्यंजनहरु परिमार्जन गर्न को लागी सजिलै सजिलो छैन दुई पटक सामग्री र समय राख्नु। यसैले यो रोचक छ कि तपाइँ टिप्पणीहरू पढ्नुहुन्छ किनकि कहिलेकाँही हामी जवाफहरूमा नोटहरू छोड्दछौं। र यदि तपाईंलाई शंका छ भने तपाईं जहिले पनि हामी सोध्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो अवस्थामा वाइन र पिठो यस तयारीमा महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ दुबैलाई हेर्नुहुन्छ भने, हामीले एउटै मात्रामा दाखमद्य र पिठो मोटो तर धेरै कडा सास बनाउनको लागि प्रयोग गरेका छौं।
अर्कोतर्फ, प्रयोग गरिएको रक्सीको पनि एक प्रभाव छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि रक्सीको वाष्पीकरणको समयमा तापमान भेरोमामा उठाइन्छ र तपाइँले बीकर राख्नुहुन्न। यदि वाष्पीकरण चरणको अन्त्यमा तपाईं अझै धेरै वाइनको गन्ध लिनुहुन्छ भने, तपाईं समान तापमान र गतिमा एक वा दुई मिनेट लामो गर्न सक्नुहुन्छ।
म तपाईंको बीन्स बचाउन के चाहन्छु सोसबाट निकालिन्छ। म पुरानो सॉस खारेज र एक नयाँ बनाउन। चरण In मा म समय र कार्यक्रम minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बायाँ मोड परिमार्जन गर्दछ।
अनार, टुना र स्ट्रबेरी विनाग्रेट सलाद